Mogadishu Journal » 2021 » August » 25
Wasiirka Maaliyadda oo kulan la qaatay Wakiilka Bangiga Adduunka ee Somaliy (Sawirro)
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta kulan kula qaatay xarunta Wasaaradda Maaliyadda wakiilka Bangiga Adduunka u qaabilsan Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dalalka bariga Afrika, Kristina Svensson. Shirka uu Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya la yeeshay...
Banaan bax looga soo horjeeday Al Shabaab oo maanta la dhigay (Daawo Sawirada)
Waxaa maanta Koonfurta magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug ka dhacay banaan bax balaaran oo looga soo horjeeday kooxda Al Shabaab ee dagaalka ka wada qeybo kamid ah gobolka Mudug. Shacabka ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ayaa isugu soo baxay banaan baxan looga soo horjeeday Al...
FIFA ayaa $ 201million oo magdhaw ah siisay Waaxda Caddaaladda ee Mareykanka
FIFA ayaa lagu abaalmariyay $ 201million oo magdhow ah falal dambiyeedyada mas’uuliyiintii hore. Sannadkii 2015 -kii, guddiga kubbadda cagta adduunka waxaa soo weeraray mas'uuliyiinta Switzerland iyaga oo wakiil ka ah Waaxda Caddaaladda Mareykanka, iyadoo Sepp Blatter uu ka mid...
Taliban oo magacowday Wasiiro cusub, taliyaha Sirdoonka iyo Duqa Magaalada Kabul
Sida ay baahisay Wakaaladda wararka Pajhwok ee dalka Afghanistan Taliban ayaa magacawday Wasiiradii ugu horeeyey Maamulkeeda, Madaxa sirdoonka iyo Maayarka cusub ee magaalada Kabul. Xubnaha la magacaabay oo ka kooban 8 xubnood ayaa waxay kala yihiin:- Sakhaullah waxaa loo...
Puntland oo shaqo joojin ku sameysay masuuliyiin lagu eedeeyey Musuqmasuq (Akhriso)
Hanti dhawrka Guud ee Puntland ayaa shaqo joojin ku sameeyey saraakiil ka tirsan Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Ee Dawladda Puntland, kadib markii natijada horudhaca ah ee baarista ay muujisay inay jirto lunsasho hanti dadweyne. HOOS KA AKHRISO QORAALKA
(Sawirro) Tartanka ciyaaraha gobolada Puntland oo galabta la soo gebagebeeyey
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ayaa galabta soo xiray tartanka 8-aad ee koobka kubadda cagta Gobollada Puntland oo ka socday Garoonka Mire Awaare Stadium Garoowe. Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland ayaa ka qeybgalay oo daawaday Ciyaartii...